10 caqabad oo Farmaajo ka hortaagan in uu noqdo madaxweynahii loo baahnaa - Caasimada Online
Home Maqaalo 10 caqabad oo Farmaajo ka hortaagan in uu noqdo madaxweynahii loo baahnaa
10 caqabad oo Farmaajo ka hortaagan in uu noqdo madaxweynahii loo baahnaa
Lix iyo Toban(16)-kii sano ee la soo dhaafay waxaa madaxtooyada(Villa Somalia) soo maray madaxweynayaal badan, marka laga reebo Protocol iyo magac u baxay, ma jirin madaxweyne ku guuleystay soo celinta dowladnimada Soomaaliya, ma jirin madaxweyne ka shaqeysiiyay dhammaan hey’adaha dowladda, arrintaasi in laga gudbo waxaa loo baahan yahay madaxweyne leh aragti iyo awood sare iyo xukuumad ka daran!!
Marka laga soo tago farxadda iyo soo dhaweynta madaxweynaha cusub Farmaajo loo sameeyay, waxaa jiro caqabado uu kala kulmi doono dadka loo yaqaano “deep state” kooxdan waa lug gooyo aabaheed, waa koox qeyb ka ah ciidanka, hey’adaha dowladda, shaqaalaha rayidka ah, shirkadaha ganacsiga, bahda waxbarashada, beelaha hubeysan, maamul goboleedyada iyo meelo badan oo dalka ah, illaa Farmaajo uu kooxdaas ka adkaado mas’uuliyaddiisa iyo xilkiisa waa qabyo.
Nabad-galyada: Nabad in la helo waa imtixaan hor yaalla Farmaajo, Muqdisho sanadkii ugu dambeeyay bishiiba waxaa ka dhacayay illaa labo qarax oo loo geysanayo Hoteellada, waxaa intaa dheer in qof waliba uu xoog aaminsan yahay, isagoo isku ah garsoore, Maxkamad iyo fulinta, Ciidamada Booliis iyo Militari midna ma dhisna, iskaba daa maxkamado, madaxweyne Farmaajo imtixaankiisa koowaad waa nabad-galyada caasimadda iyo guud ahaan dalka.
Beelaha Hubeysan: Caqabada ugu badan ee dowladihii madaxweyne Farmaajo ka horreeyay shaqo la’aanta ku riday waa hubka ay sitaan beelaha Soomaaliyeed, xataa ciidamada iyo hubka dowladda federaalka ay sheegato waxaa iska leh beelo gaar ah, in Soomaaliya laga qaado cunaqateynta hubka, in uu hub ka dhigis uu ku sammeeyo beelaha Soomaaliyeed iyo dhismaha ciidan qaran waa caqabad kale oo hor-taalla madaxweyne Farmaajo.
Maamul Goboleedyada: Madaxda maamul goboleedyada kama xishoodaan madaxweynaha federaalka ah, waxaa ay ku wada jiraan madasha hoggaanka qaranka, xantooda waa mid suuqa taallo, raggan waxaa ay heshiis la galaan dalkii ay rabaan, qeylo waxaa ugu dambeysay Berbera, Farmaajo si uu madaxweyne rasmi ah u noqdo waa in uu yareeyo kaalinta iyo awoodda maamul goboleedyada, oo kooxdan ay ku ekaadaan u adeegidda shacabka ay maamulaan.
Xukuumadiisa: Madaxweynayaashii Farmaajo ka horrreeyay waxaa lug gooyay raggii uu xukuumadda u dhiibteen, si aad u ogaato siyaasadda madaxweynaha waxaad wici kartaa wasiir ka tirsan xukuumadiisa, waxaa uu kuu sheegayaa sir kasta oo ku saabsan xafiiska madaxweynaha iyo qorshaha uu rabo, arrinkaas waa mid khatar ku ah dowladnimada, Farmaajo waxaa imtixaan ku noqon doona ragga uu soo xulan doonno.
Ugu dambeyntii, Ma dhahaayo “Farmaajo ii geeya, Laakin waxaan leeyahay Farmaajo hala tuso qoraalkan, waayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi farmaajo waxaa sugaya Toban(10)-kaas caqabad, haddii uu ku guuleysto waxaan dooran doonaa inshaa-alaah doorashada 2020-ka, haddii uu ka gaabiyana Macasalaamo, qormadanna waa marqaati.